ဒီနေ့ဟာ IBM “Stretch” Computer ကိုအသုံးပြုမှု လုံး၀ရပ်ဆိုင်းခဲ့တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်
date_range 05 September 2017
visibility 500 Views
စက်တင်ဘာ ၅၊ ၁၉၈၀ ခုနှစ်မှာ IBM ကနေ Supercomputer အမျိုးအစားအဖြစ် ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ “Stretch” ကို အသုံးပြုမှု လုံး၀ရပ်ဆိုင်းခဲ့တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအသုံးပြုခဲ့တာကတော့ Brigham Young University ဖြစ်ပြီး၊ အနှစ်နှစ်ဆယ်လောက် အသုံးပြုပြီးတော့မှ အခုလိုရပ်ဆိုင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
IBM 7030 (ဒါမှမဟုတ်) “Stretch” ကို ၁၉၆၁ ခုနှစ်မှာ ပထမဦးဆုံးနမူနာအနေနဲ့ Los Alamos National Laboratory သို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီး၊ ဒုတိယ Customized Version ကိုတော့ ၁၉၆၂ ခုနှစ်မှာ National Security Agency သို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ “Stretch” ဟာ Vaccum Tubes တွေအစား Transistors တွေနဲ့ပြုလုပ်ပြီး တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ ပထမဦးဆုံး Supercomputer လည်းဖြစ်ပါတယ်။
“Stretch” အနေနဲ့ Performance ဟာ ထင်သလောက် မမြန်ဆန်ခဲ့ပေမယ့်လည်း ၁၉၆၁ ခုနှစ်ကနေ ၁၉၆၄ အထိတော့ ကမ္ဘာ့အမြန်ဆုံးကွန်ပျုတာအဖြစ် စံချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၆၄ ခုနှစ်မှာတော့ Control Data Corporation ကထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ CDC 6600 Mainframe Supercomputer ဟာ ကမ္ဘာ့အမြန်ဆုံး Computer အဖြစ် အစားထိုးနေရာယူခဲ့ပါတယ်။
This Day In Tech History Wikipedia
I'm an Android geek with full of wonders about UNIX devices like smartphones, laptops & other stuffs those are small and powerful. Plus, I love Hatsune Miku and watch animes occasionally!
စမတ်ဖုန်းကို ကွန်ပြူတာတစ်လုံးအသွင်ပြောင်းလဲပေးမယ့် Remix OS
Atom တစ်လုံးထဲမှာတင် Data သိမ်းထားနိုင်မယ့် နည်းလမ်းသစ်ကို တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ IBM
Twitter အသုံးပြုသူ ၄၈ သန်းကျော်ဟာ Bot တွေဖြစ်နေ
Computer Supercomputer IBM IBM 7030 Stretch Transistorized
MI 5X2Refurbished2Xiaomi Mi A13South Park 1 Bezel-less smartphone9Myanmar Unicode Standard3Stories3University of California Los Angeles 1 Pro Evolution Soccer 1 Copyright7Power Consumption 1 Windows Defender3Database 2